ထိုင်းစတိုင် ပြည်ကြီငါးသုတ် | Wutyee Food House
« ကိုရီးယား တော့ပူကီ
‘ဂျပန် တို့ဟူးကင်’ »
September 14, 2011 by chowutyee ထိုင်းစတိုင် ပြည်ကြီငါးသုတ်
on September 14, 2011 at 9:09 am | Reply Cho Wut Hmone
sar chin sa yar lay bar lar…..treat me
on September 14, 2011 at 9:18 am | Reply chowutyee
on September 14, 2011 at 12:25 pm | Reply Kay Kay
ပြည်ကြီးငါးကို ဘယ်လောက်ကြာအောင်ပြုတ်ရမလဲနော် အစ်မ?
on September 14, 2011 at 3:04 pm | Reply chowutyee
ပြည်ကြီးငါးက ထည့်ပြီ ခဏပဲ၊ ၁မိနစ်ဝက်လောက်ဆိုရင် ပြန်ဆယ်လို့ရပြီ။ လုပ်စားကြည့်နော် ကေကေ..😀
on September 14, 2011 at 8:01 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
လှလဲလှ စားလဲစားချင်စရာပါလား ဝတ်ရည်ရယ်
ဝတ်ရည်ကတော့ တကယ်ကို တော်ပါတယ်
on September 19, 2011 at 4:20 am | Reply chowutyee
မချော လုပ်ရင် ကောင်းမှာ သေချာပါတယ်.. ကျေးဇူးပါ😀
on March 17, 2012 at 12:38 am | Reply khin thandar
Sis ..How to make salt and pepper powder for deep fried pork?
on March 17, 2012 at 12:40 am | Reply khin thandar
Sis …Australia mha ရှောက်ရွက် rare to see. Instead of ရှောက်ရွက် what should i put it inside?
on March 17, 2012 at 4:10 am | Reply chowutyee
ရှောက်ရွက် မရှိရင် မထည့်လည်း ရပါတယ်။ အနံ့လေးပဲ ကွာမှာပါ..🙂
on March 21, 2012 at 11:37 pm | Reply khin thandar
Sis ..how to call ရှောက်ရွက် in English? I want to try to find it.
on March 28, 2012 at 3:34 pm | Reply chowutyee
ရှောက်ရွက် = lemon grass.. Plz try it.. Thanks😛
on April 19, 2012 at 4:42 am | Reply darlay
အမ ! ထိုင်းမင်းကြော်စပ်စပ်လေးလည်းလုပ်ပေးပါအုံးနော်
on April 19, 2012 at 4:44 am | Reply darlay
g-mail account shi yin lae pay par own naw !
on April 11, 2013 at 11:15 pm | Reply myintnainghtun